Akụkọ Bible: Ngwụsị nke Ihe Ọjọọ Niile - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
GỊNỊ ka ị na-ahụ n’ebe a? Ọ bụ ụsụụ ndị agha nọkwasịrị n’ịnyịnya ọcha. Ma lee ebe ha si na-abịa. Ha si n’eluigwe na-agbadata! È nwere ịnyịnya n’ezie n’eluigwe?
Ee e, ha abụghị ịnyịnya nkịtị. Anyị maara nke ahụ n’ihi na ịnyịnya apụghị ịgba ọsọ n’igwe ojii, hà pụrụ? Ma Bible na-ekwu banyere ịnyịnya ndị dị n’eluigwe. Ị̀ ma ihe mere o ji na-ekwu nke a?
Ọ bụ n’ihi na e ji ịnyịnya buo ọtụtụ agha n’oge gara aga. N’ihi ya, Bible na-ekwu banyere ndị si n’eluigwe gbara ịnyịnya na-agbadata iji gosi na Chineke ga-ebuso ndị nọ n’ụwa agha. Ị̀ ma ihe a na-akpọ ebe a ga-anọ lụọ agha ahụ? Ọ bụ Amagedọn. Agha ahụ ga-ekpochapụ ihe ọjọọ niile n’ụwa.
Jizọs ga-abụ Onyeisi n’agha Amagedọn ahụ. Cheta na Jizọs bụ onye Jehova họpụtara ịbụ eze nke ọchịchị Ya. Nke a mere Jizọs ji kpuru okpueze. Mma agha o ji na-egosi na ọ ga-egbu ndị iro niile nke Chineke. Ò kwesịrị iju anyị anya na Chineke ga-ebibi ndị ọjọọ niile?
Leghachi anya n’Akụkọ nke 10. Gịnị ka ị na-ahụ n’ebe ahụ? Ọ bụ oké iju mmiri ahụ bibiri ndị ajọ mmadụ. Ònye wetara Iju Mmiri ahụ? Ọ bụ Jehova Chineke. Ugbu a, lee anya n’Akụkọ nke 15. Gịnị na-eme n’ebe ahụ? Ọkụ nke Jehova zitere na-ebibi Sọdọm na Gọmọra.
Saghee Akụkọ nke 33. Lee ihe na-eme ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya ndị Ijipt. Ònye mere ka mmiri ahụ rikpuo ha? Ọ bụ Jehova. O mere ya iji chebe ndị ya. Lee anya n’Akụkọ nke 36 na nke 76. Ị ga-ahụ n’ebe ahụ na Jehova kwere ka e bibie ọbụna ndị Izrel bụ́ ndị ya, n’ihi ajọ omume ha.
Ya mere, o kwesịghị iju anyị anya na Jehova ga-ezite ndị agha ya nke eluigwe ịkwụsị ihe ọjọọ niile n’ụwa. Cheedị ihe nke ahụ ga-apụta! Sapeta peeji nke na-esonụ ka anyị lee.
Mkpughe 16:16; 19:11-16.
N’ihi gịnị ka Bible ji ekwu okwu banyere ịnyịnya ndị dị n’eluigwe?
Gịnị bụ aha agha Chineke ga-alụso ndị ajọ mmadụ n’ụwa, gịnịkwa mere a ga-eji lụọ agha a?
Dị ka foto a na-egosi, ònye ga-ebute ụzọ n’agha ahụ, n’ihi gịnị ka o ji kpuru okpueze, gịnịkwa ka mma agha ya na-anọchi anya ya?
N’ileghachi anya azụ n’Akụkọ nke 10, nke 15, na nke 33, n’ihi gịnị ka anyị na-ekwesịghị inwe ihe ijuanya na Chineke ga-ebibi ndị ajọ mmadụ?
Olee otú Akụkọ nke 36 na nke 76 si egosi anyị na Chineke ga-ebibi ndị ajọ mmadụ n’agbanyeghị na ha na-azọrọ na ha na-efe ya?
Gụọ Mkpughe 19:11-16.
Olee otú Akwụkwọ Nsọ si mee ka o doo anya na Jizọs Kraịst bụ onye ahụ nọ n’elu ịnyịnya ọcha ahụ? (Mkpu. 1:5; 3:14; 19:11; Aịsa. 11:4)
Olee otú ọbara e fesara n’uwe elu Jizọs si egosi na ọ ga-enwe mmeri zuru ezu? (Mkpu. 14:18-20; 19:13; Aịsa. 63:1-6)
Ole ndị ka o yiri ka à gụnyere n’ụsụụ ndị agha so Jizọs ka ọ nọkwasịrị n’elu ịnyịnya ọcha ya? (Mkpu. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)